Ségou Village Connection: Aterineto Finday Mampifandray Olona · Global Voices teny Malagasy
Ségou Village Connection: Aterineto Finday Mampifandray Olona
Nandika (fr) i Thalia Rahme
Voadika ny 28 Mey 2011 22:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, عربي, Español, English
Tsotra ny tanjon'ny tetikasa Ségou Village Connection ao Mali, iray amin'ireo tetikasa nahazo ny famatsiam-bola avy amin'ny Rising Voices: mampifandray ny mponina ambanivohitra sy ny mponina an-tanan-dehibe ao Mali amin'ny alalan'ny finday sy ny Aterineto.
Boukary Konaté, bilaogera maliana, mpanentana mavitrika amin'io tetikasa io no manazava ny maha-iankinan'ny ain-dehibe io fifandraisana io :
Boukary Konaté. Sary ao amin'ny Flickr Workshop.segou
Ny tsy fisian'ny fitaovana fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana eny amin'ny faritra ambanivohitra ao Mali no antony iray tsy ahafantaran'ny mponina ambanivohitra ny zava-mitranga karakaraina sy ny fandraisana an-tanana ho amin'ny fampandrosoana. Etsy ankilany, manankarena zava-mitranga, fomba nentim-paharazana, riba ary kolontsaina mendrika ho fantatry ny hafa ny any ambanivohitra.
Sary navoaka nankatoavin'ny Acntx. CC By-SA 3.0
Nisongadina tamin'ny andiam-pandaharana fanadihadiana anaty lahatsary notontosain'i Phil Paoletta tao amin'ny tranokala How to Draw Camels – Ahoana no fandoko rameva i Boukary. Tao amin'io horonantsary io no nilazan'i Boukary ny fomba hahafahan'ny mponina ambanivohitra ao Ségou, izay zara raha mahita aterineto, hampiasa ny findainy mba handefa vaovao izay mitranga ao an-tanàna ho an'ny mponina mipetraka ao an-drenivohitra Bamako.
Ny 1 mey 2011, dia nisy fotoam-piofanana natao tao an-tanànan'i Cinzana-Gare, 30 km miala ao Ségou. Nifototra momba ny fomba ahafahan'ireo mpandray anjara ao an-tanàna marobe mandefa vaovao ho an'ny mpitantana ny tranokala amin'ny alalan'ny SMS sy amin'ny taxis-brousse ataon'ny mpandray anjara avy any ambanivohitra sy ny fomba ifampitan-dresaka eo amin'ny mpamaky sy ny mponina ambanivohitra.
Taorian'ny fiofanana, dia nisy ekipa iray be herim-po no nahavita vaovao amin'ny alalan'ny SMS, na dia mbola tsy manana solosaina, solaitra fakana angovon'ny masoandro, vatoaratra ary Aterineto fitondra 3G azy ireo manokana aza izy ireo.
Indreto sombiny tamin'ireo hafatra samihafa nalefa izay samihafa amin'ireo izay vakiantsika isan'andro amin'ny aterineto:
Nanontany antsika i Seydou, mpampianatra ao Ngakoro, ao amin'ny kaominina Cinzana-Gare:
Afaka misolo ny kitay fandrahoan-kanina ve ny angovo azo avy amin'ny masoandro mba hisorohanana ny fandripahana ny ala ?
Hamidou, mpampianatra hafa ao Ngakoro, mampatsiahy ny olana amin'ny tsy fisian'ny “réseau” iasan'ny telefonina ao an-tanàna:
Raha te-hiantso anay amin'ny alalan'ny finday aty Ngakoro ianao, dia mahareta, miantso foana satria tsy voatery hanaraka anay hatrany ny finday. Ny olana amin'ny tsy fisian'ny “tambazotra ifampiantsoana” aty an-tanàna no mahatonga anay tsy maintsy manantona ny finday eny ambonin'ny hazo na eny ambonin'ny tafon-trano. Ka raha vao maneno ny finday, dia tonga izahay hihaino. Antenainay fa ho avy hanampy anay ny orinasa momba ny fifandrasaina mba hamaha izao olana izao.
Raha te-hamaky hafatra bebe kokoa dia tsindrio eto.
Tantaran'ny Mali farany
18 Aogositra 2019Angletera
Taratasim-pifandraisana DigiGlot : mahita toerana any anatin'ireo sehatra tsy mitsahatra fandefasana mozika ny rock ao Galles